२५ बर्षभन्दा बढि लामो समय पत्रकारिता गरेर देशलाई सहि सुचना प्रबाह गर्ने पत्रकार आज ब्ल ड क्या न्सर सँग जुधिरहँदा देशको सरकार बेख़बर छ! : ज्वाला संग्रौला – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/२५ बर्षभन्दा बढि लामो समय पत्रकारिता गरेर देशलाई सहि सुचना प्रबाह गर्ने पत्रकार आज ब्ल ड क्या न्सर सँग जुधिरहँदा देशको सरकार बेख़बर छ! : ज्वाला संग्रौला
एक असल समाजसेवा गर्नेले न त अरुले गरेको कामलाई औंला उठाउँछ, न त छेडछाड नै गर्छ, ऊ काम गर्छ त बस् निःस्वार्थ भएर गर्छ ! मैले आजसम्म कसैले चलाएको अभियानप्रति प्रस्न उठाएको छैन र उठाउँदिन पनि ! चाहे मिडियामा आएको होस् चाहे नआएको होस् , पीडित पीडित नै हुन्छ! भोलि हामी चन्दा उठाएर चर्चित भएका मध्य ल कसैलाई घातक रोग लाग्यो भने त्यो त चर्चित हो , यस्लाई किन सहयोग गर्नु भन्ने भावना सहयोगी हरुको मनमा आयो भने के हुन्छ? अर्को कुरो फ़ेसबुक सन्जाल अलि फराकिलो हुनेहरुको सहयोगी पोस्टहरु यसै पनि धेरैतिर पुग्छन्! र चर्चा यतिकै पन हुन्छ! अनि यस्तो कुरालाई पनि issue बनाएर औंला उठाउने हो भने तपांई मानविय सिँढीको सबैभन्दा नीच खुड्किलोमा अड्किनु हुनेछ! सक्नेले हौसला दिने हो, प्रेरणा दिने हो तर अन्टसन्ट लेखेर भँडास पोख्ने हैन नि ! अनि अहिले मैले जुन अभियान चलाएको छु, वहाँ आफैं मीडियाकर्मी भएर पनि वहाँको रोगबारे कतैपनि मिडियामा भाईरल बनेर चर्चा छैन ! कति साथीहरुले त मेरो पोस्टबाटै जानकारी पाउनु भो! Even वहाँको बिरामी भएर अस्पताल को बेडमा सुतेको फोटो सुद्द छैन भने वहाँ कसरी भाईरल हो? कि मैले अभियान चलाएर भाईरल भन्देको समाजसेवी साथीहरु? हेर्नुस म तपाईँहरु जस्तो बरिस्ठ कनिस्ठ समाजसेवी हैन, कसैको दुखको सानो सहयात्री मात्र हुँ! कृपया समाजसेवा के हो राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र आफ्ना अभिव्यक्ति हरु राख्नु होला..! यो बेला कमल सरको पुरै शरिरलाई ताज़ा रगतको अभाव छ, वहाँको जीबन रक्षाको लागि सकेको सहयोग गरिदिनु होला ! बाँकी के सहि के ग़लत बिस्तारै छलफल गरौंला! धन्यबाद ! जय स्वाभिमान!
प्रचण्डको नातिनीले पल शाह र स्वस्तिमालाइ यसरी नचाइन् (भिडियो हेर्नुस्)